Oromoota daangaa Oromiyaaf kufaa jiraniif birmannaan bifa hundaa hatattamaan barbaachisa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Oromoota daangaa Oromiyaaf kufaa jiraniif birmannaan bifa hundaa hatattamaan barbaachisa
Oromoota daangaa Oromiyaaf kufaa jiraniif birmannaan bifa hundaa hatattamaan barbaachisa
Lammii dhumaa jiruuf nyaataa fi dhugaatii kaleessuun, isa madaayeef haala wol’aansaa mijeessuu fi kan lolaa jiruuf rasaasaa fi qawwee lubbuu isaa ittiin baraaratu dhiyeessuun dirqama yeroon gaafatuudha.
Lafti Oromoo dangaa fi keessanis saamamaa fi weeraramaati kan turte. Dangaan lafa Oromoo bal’aana yeroo jaarraa tokko hin caalle keessatti kallattii hundaan saamame; saboota biraatiin humnaan qabame. Saboonnii biraa gaaraa fi laga meeqa ce’anii dhufanii Finfinnee, Dirree Dawaa, Adaamaa, Jimma, Mooyyalee, Nageellee fi Mi’eessoon hanga teenna jechuutti deeman. Qe’ee fi qabeenya Oromoo fudhachuu bira darbamee, tufii kana hin jedhamntetu saba kanatti agarsiisfame.
Inni durii osoo hin hanqatin, har’as, naannoon Somaalee, imaammata mootummaa Woyyaaneen deeggaramaa fi humna woraanaa mootummaa federaalaatti gargaaramaa, Oromoo buqqisuu fi dhiiga lammii daangaa irra jiraatuu dhangalaasuu hujii godhateera. Woraanni kan geggeeffamaa jiru humna Liyyuu Poolisii Abdii Illeen bobbaasee fi qotee-bulaa Oromoo qawwee mitii shimalli gaariinis osoo hin hafin akka hiikkatu taasiafame jiddutti. Madaallii humnaa wolhin gtne kana kan gaaga’ama gayaa jiru hammeessaa fi lafti lafti Oromoo humnoota Somaaleen akka salphatti akka fudhatamuuf haala mijeessaa kan jiru . Gocha gara-jabeenyaa kun onnee Oromoo hundaa booresse. Sabaaf gadduun qofti gayaa miti, garuu. Saamichii fi yakki lammii irratti raawwatamu babal’ataa fi kallattii hunda ulataati kan jiru. Yakki Cinaaksan, Mi’eesoo fi Baabiletti raawwatamaa ture yeroo ammattii Raayituutti (Baale) gayee jira. Boru ammoo shakkii tokkoon maletti Nageellee fi Mooyyaletu saamama; Oromoo Gujii fi Booranaatu dhumaatiis saaxilama. Mootummaan naannnoo Oromomiyaa woraana kana dhaabsisuu hin dandeenne. Mootummaan federaalaa harka akka keessaa qabuudha kan himamaa jiru. Dirqamni lammii baraaruu fi daangaa lafa Oromoo tiksuu kan jiru dhaloota kana irra: dhiigaa fi qabeenyaanis.
Lammiileen daangaa irra jiran yeroo woraanni irratti banamee eegaleeti kan iyyiinsa nu dhaqabaa dhaggeessisaa turan. Kan ajjeefame baay’eedha. Kan madaaye heddu. Kan qe’ee fi qabeenya isaa irraa buqqa’e kumaatama. Ijoollee fi haawwotiin, kanniin abbootiin irraa dhuman dabalatee, kumaatama kan beelaa fi dheebuuf saaxilaman. Worri lafa isaanii kabajsiisuuf lolaa jiran ammas harka qullaadha kan Liyyuu Poolisii afoo dhaabatan. Osoo Oromoon, biyyaa fi biyaan alattis, miliyoonni meeqaa jjiru kun ta’uun isarra hin turre. Daangaa fi kabajaan isaa eegsisuudhaaf kufaa jiraniif kan dhuunfaa isaanii miti: kan Oromoo hundaati.
Yeroon osoo hin gubin Oromoon daangaa daangatti socho’uudhaan lammii dhumaa jiruuf nyaataa fi dhugaatii kaleessuu, isa madaayeef haala wol’aansaa mijeessuu fi kan lolaa jiruuf rasaasaa fi qawwee lubbuu isaa ittiin baraaratu dhiyeessuun dirqama yeroon gaafatu.
Previous articleWaamichaa ADO/ODF Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf
Next articleBBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo Guyyoottan Muraasa Keessatti Akka Eegalu Beeksise